Wiil Mareykan ah oo ku guuleystay Koobkii Adduunka ee ciyaar gacmeedka Fortnite (imisa Milyan $ ayuu abaalmarin u helay?)
Mogadishu - 21:22:33
Monday July 29, 2019 - 16:41:34 in Wararka by Super Admin
Wiil da’yar ah oo u dhashay waddanka Mareykanka ayaa ku guuleystay Koobkii Adduunka ee ciyaar gacmeedka Computer-ka laga dheelo ee Fortnite.
Kyle Giersdorf oo 16 jir ah oo Online-ka looga yaqaanno magaca Bugha ayaa isagoo faraxsan ku guuleystay Koobkan oo ciyaartiisa kama dambeysta ahayd lagu qabtay garoonka weyn ee Tennis-ka US Open lagu qabto ee Arthur Ashe Stadium ee New York, waxaana uu wiilkani abaalmarin ahaan u helay 3 Milyan oo dollar.
Waa Abaalmarintii ugu qaalisanayd abid ee lagu bixiyo ciyaaraha gacanta laga dheelo ee E-Sports, iyadoo 30 milyan oo dollar loo qaybiyay dhallinyarada soo gaartay kaalimaha hore.
Jaden Ashman oo isna ah 15 jir Ingiriis ah ayaa isna galay kaalinta 2-aad isagoo qaatay 1.2 Milyan oo dollar, halka wiil kale oo isna Ingiriis ah Kyle Jackson oo loo yaqaanno magaca ‘Mongraal’ uu isna lacag fiican soo helay.
Wiilka kaalinta 1-aad galay ee 3 Milyan oo dollar ku guuleystay ayaa isagoo u warramayay BBC-da wuxuu sheegay inuu aad u faraxsan yahay, lacagtaasina uu keydsan doono, haatanse waxa uu u baahan yahay oo keliya ay tahay Xafiiskiisa u gaarka ah iyo miis qurux badan oo uu ku keydsado Koobka uu ku guuleystay.
Is reeb-reeb dheer ayaa ciyaartan waxaa u soo galay 40 milyan oo qofood muddo 10 isbuuc ah, hase yeeshee waxaa kama dambeysta u soo gudbay 100 ciyaartooy.
Dakhliga iyo jaceylka loo qabo ciyaaraha Computer-ka laga dheelo ayaa sii kordhaya iyadoo 2019 la qiyaasay in shirkadda Fortnite ay u soo xarootay 3 Bilyan oo dollar.
Guud ahaan caalamka waxaa diiwaan gashan illaa 200 oo milyan oo ciyaartooy oo dheesha Ciyaar gacmeedkan Fortnite, taasoo si lacag la’aan ah aad uga degsan karto internet-ka, laakiin inta aad ciyaarayso ayaad wixii aad u baahan tahay lacag kaga dhex iibsan kartaa.
Isku soo wada duuboo khubaro badan ayaa ka deyrinaysa ciyaaraha online-ka laga dheelo, kuwaas oo ay tilmaameen in ay noqdeen mid sida balwad oo kale ah qofka u qabanaysa, iyadoo qofka ciyaarayana uu dheelayo wax ka badan 8 saacadood maalin walba.
A 16-year-old just won $3 million in the first-ever #FortniteWorldCup
That's 5 times more than the winner of the Tour de France takes home pic.twitter.com/vACPuJy8H6